UEFA oo go'aamisay adeegsiga Goal-Line - BBC News Somali
UEFA oo go'aamisay adeegsiga Goal-Line
Image caption Farsamada Goal-Line loo adeegsado
Xiriirka kubbadda cagta ee Yurub(UEFA) waxay ansixiyeen farsamada casri ah oo kala caddeysa in goolku uu dhashay iyo in kale,waxaana farsamadan loo adeegsanayaa tartanka horyaalka Yurub ee sanadkan 2016 lagu qaban doono waddanka Faransiiska.
Guddiga fulinta ee UEFA ayaa arrintaas isku raacay, waxayna sheegeen in markaasi kaddib lagu fidin doono tartamada kale ee kubbadda cagta ee Yurub, oo uu ugu weyn yahay tartanka Champions League ee horyaalka kooxaha Yurub oo ay ka qayb galaan naadiyada ugu sarreeya qaaradda.
Farsmadani waxay adeegsanaysaa qalab elektaroonik ah si ay garsoorayaasha kubbadda cagta uga caawiso inay go'aan ka gaaraan in kubbaddu si buuxda xariiqda u dhaaftay oo ay gudaha goolka gashay iyo in kale. Arrintan ayaa ka mid ah waxyaabaha loogu muranka badan yahay ciyaarta kubbadda cagta.
Farsamadan waxaa si guul ah loogu isticmaalay tartankii koobka adduunka ee sanadkii 2014-kii lagu qabtay dalka Brazil.